Maqaa fii Bilbilli isaanii kunooti! Shaneen mana maree sirna Gadaati. Galmee shoororkeessaa keessatti maqaan shanee jedhamu yoommuu galmaa’u dhalataan Oromiyaa taa’ee ilaalu duudhaa isaa gane jechuu dha. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMaqaa fii Bilbilli isaanii kunooti! Shaneen mana maree sirna Gadaati. Galmee shoororkeessaa keessatti maqaan shanee jedhamu yoommuu galmaa’u dhalataan Oromiyaa taa’ee ilaalu duudhaa isaa gane jechuu dha.
Maqaa fii Bilbilli isaanii kunooti! Shaneen mana maree sirna Gadaati. Galmee shoororkeessaa keessatti maqaan shanee jedhamu yoommuu galmaa’u dhalataan Oromiyaa taa’ee ilaalu duudhaa isaa gane jechuu dha.
Manni Maree Ministeerotaa guyyaa kaleessaa Tplf fi Shanee Shoororkeessummaan farrajuun akka raggaasifamuuf gara Paarlaamaatti erganii jiru.Paarlamaa keessatti harki lama sadaffaan yoo raggaasifame hojii irra oola. Shaneen mana maree sirna Gadaati. Galmee shoororkeessaa keessatti maqaan shanee jedhamu yoommuu galmaa’u dhalataan Oromiyaa taa’ee ilaalu duudhaa isaa gane jechuu dha.Lollii fi duulli shororkeessummaa oromummaa duudhaa sirna Gadaa irratti malee WBO akka hin taane maqaan ni ibsa. Kanaaf, lammiileen Oromiyaa hundi miseensota paarlamaa naannoo keenyatti argaman kanneen biroofis bilbillee hubannaa fi ejjennoo cimaa akka qabaatan qooda keenya haa baanu.
Maqaa fi bilbilli isaanii kan armaan gadiiti.
ጉራዉ ገደለን በባዶ ሜዳ ! ታግሎ እንዳመጣ የሌላዉን ድል ሰርቆ የጉድ አገር! ይህች ነች የዛሬዋ ኢትዮጵያ:: Yaa gadi guddattuu biyyaa!